यस्तो भयो एनआरएनए अफ्रिका बैंठक, के भन्छन् त सहभागीहरु ? « Sansar News
६ माघ २०७५, आईतवार १९:३१
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अफ्रिका क्षेत्रीय सम्मलेन १२ बुँदे कम्पला घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । जारी घोषणापत्रमा अफ्रिकी मुलुक हुँदै अबैधानिक रुपमा युरोप र अमेरिकामा छिर्ने लोभमा मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेको र नेपालीले अनेक दुःखकष्ट भोग्नु परेको यथार्थलाई तत्काल रोक्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पूर्वी र पश्चिम अफ्रिकी मुलुकमा कम्तिमा एक एक वटा दूतावास खोल्नका लागि नेपाल सरकारसंग आग्रह गर्ने, नेपाल र अफ्रिकामा आपसी लगानीका लागि रहेको पर्याप्त सम्भाबनालाई ध्यानमा राखेर नेपाल र अफ्रिकाबीच लगानीका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्ने लगायतको बुँदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
डिसेम्बर २९–३० मा कम्पलामा सम्पन्न भएको उक्तक्षेत्रीय बैठकमा अफ्रिका महादेशका एकदर्जन बढी मुलुकबाट १५० जनाको सहभागीता रहेको थियो ।
एनआरएनए अफ्रिका संयोजक सुनिल कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त उद्घाटन सत्रमा नेपाली दूतावास इजिप्टका राजदूत झविन्द्रप्रसाद अर्यालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने युगाण्डा सरकारका तर्फबाट रेसिडेण्ट डिस्टिक कमिस्नार श्रीमती हावा नामुजेनी र एनआरएनए अध्यक्ष भवन भट्टको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो ।
त्यस्तै एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, उपाध्यक्ष कुल आचार्य, सचिव डिवी क्षेत्र र कोषाध्यक्ष हिक्मतबहादुर थापा, स्थानीय एनआरएम पार्टीका नेता न्याज अब्दुल, डेपुटी महिला संयोजक अफ्रिका तथा आइसीसी सदस्य मन थापा, आइसीसी सदस्य मनोज गोर्खाली, एनआरएनए सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. हेमन्त दवाडी, एनआरएनए युगाण्डाका संस्थापक तथा पोर्चुगलका अध्यक्ष कुवेर कार्की, आइसीसी सदस्य केन्या यादव काफ्ले र आइसीसी सदस्य युगाण्डा जीवनाथ पंगेनीलगायतको आतिथ्यता रहेको थियो । एनआरएनए युगाण्डाका अध्यक्ष राजमणी भण्डारीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।
तीन चरणमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा बिभिन्न देशका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए भने अतिथिहरूको स्वागतका लागि बीच–बीचमा नेपाल तथा युगाण्डाका कलाकारहरूले सांगीतिक प्रस्तुति राखेका थिए ।
पहिलो चरणमा उद्घाटन कार्यक्रम रहेको थियो । वर्षा आचार्य र एनआरएनए युगाण्डाका आशिस थापाको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा अतिथिहरूले बैठक सफलताको शुभकामना दिएका थिए ।
एनआरएनएका सचिव डिवी क्षेत्रीको अध्यक्षता रहेको दोश्रो चरणको कार्यक्रममा एनसीसी केन्याका अध्यक्ष कृष्णदत्त भट्ट, अफ्रिकाकी महिला संयोजक मन थापा, तान्जानिया एनआरएनए प्रतिनिधि पासाङ गोपर्मा शेर्पा, एनआरएनए युगाण्डाका अध्यक्ष राजमणि भण्डारी र अफ्रिका संयोजक सुनिल कार्कीले अफ्रिकामा रहेका नेपालीका गतिविधि, उनीहरूका समस्या र चुनौतीका बारेमा आफ्ना भनाई राखेका थिए ।
दोश्रो दिन ‘व्यवसाय र सामूहिक लगानी’ विषयक कार्यक्रममा जीवा लामिछानेको सभापतित्व र अध्यक्ष भवन भट्ट तथा कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाको उपस्थिति रहेको थियो । एनआरएनए युगाण्डाका महासचिवको सञ्चालनमा भएको ‘एक्सिपिरियन्स अफ डायस्पोरा इन डुइङ बिजनेस एण्ड कलेक्टिभ इन्भेष्टमेन्ट’ बिजनेश शिर्षकमा एनआरएनए सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक डा. हेमन्त दवाडीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ‘नेपालमा लगानीका सम्भावना र चुनौती’ का बारेमा राजदूत झविन्द्र अर्यालले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।
सोहि अवसरमा राजदूत झविन्द्र अर्यालले जनता–जनता बीचका सम्वन्धले दुई देशवीच बलियो सम्बन्ध स्थापना गर्ने बताउँदै एनआरएनएले यस्तो भूमिका खेलेको बताएका थिए ।
उनले नेपालमा विचार, सीप तथा आर्थिक लगानीको आवश्यकता रहेकोले गैरआवासीय नेपालीले देश विकासमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताएका थिए । साथै युगाण्डामा कार्यरत नेपालीको समस्यामा नेपाली दूतावास सदैव सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बताए । उनले अफ्रिकी देशमा अवैतानिकदूतको पहल अगाडि बढाउने बताएका थिए ।
त्यस्तै एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद् पनि एनआरएनएले धेरै काम गरेको बताउँदै जन्मभूमिमा योगदान गर्ने उद्देश्यहरू केही पूरा भएको बताएका थिए ।
लामिछानेले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारको नारामा गैरआवासीय नेपालीले ह्रैसे गर्ने बेला आएको बताउँदै नेपालमा लगानी सुरक्षित हुने तथा जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र बैंकिङ लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न उपस्थित सबैलाई सुझाएका थिए ।
त्यस्तै आर्थिक क्रान्ति बिना कुनैपनि राजनीतिक क्रान्ति सफल नहुने बताएका लामिछानले अबको पालो आर्थिक क्रान्तिको रहेकोमा जोड दिएका थिए । उनले अफ्रिकामा नेपालीहरू संख्यात्मक रुपमा नभएपनि गुणात्मक रहेको समेत बताए ।
अध्यक्ष भवन भट्टले नेपाली कार्यरत अफ्रिकी देशमा अवैतानिक दूत नियुक्तिका लागि संघले पहल गर्ने बताएका थिए । उनले देशमा राजनीति स्थायित्व भइसकेकोले देशको आर्थिक समृद्दिका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै देश समृद्द नहुँदा सम्म व्यक्तिगत रुपमा जति समृद्द भएपनि यसले कुनै अर्थ नराख्ने बताए ।
उनले सबैको विचारलाई संस्थागत गर्दै संस्था अघि बढेको बेला विदेशी लगानी नेपाल भित्राउनका लागि जोडदिनुपर्ने बताएका थिए । एनआरएनएले ३–४ महिनाभित्रमा सबै स्थानीयतहमा एउटा स्कुलसँग मितेरी सम्बन्ध अघि बढाउने बताएका थिए ।
त्यस्तै पर्यटन राज्यमन्त्रीGodfrey Kiwanda ले युगाण्डाको पर्यटन क्षेत्रमा तिब्र विकास भएकोले नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई युगाण्डाको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए ।
सोहि अवसरमा मेडम हवा नामुङ्गीले नेपाल र युगाण्डाबीच आर्थिक साझेदारी गर्दै सम्बन्ध अगाडि बढाउन सकिने बताउदै युगाण्डाका लगानीका अवसरहरू रहेको र नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई उद्योगमा लगानी गर्न सुझाएकी थिइन् ।
त्यस्तै आइडिया फर नेपालका सिइओ शिरोमणि दवाडीले अफ्रिका र नेपालबीच व्यवसायको अवसरका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।
त्यस्तै सोहि अवसरमा मिनिस्टर अफ कम्पला सिटी अथोरेटीकी द्यभतथ प्बmबथब ल्बmष्कबनय सँग विशेष सेसनको आयोजना गरिएको थियो । दोश्रो दिनको तेश्रो सेसन कुल कार्कीको अध्यक्षतामा ‘बैदेशिक रोजगारको चुनौती’ विषयमा छलफल गरिएको थियो । ‘आर्थिक विकास र अफ्रिकाबाट पाठ’ भन्ने चौंथो सेसनको अध्यक्षता हिक्मत थापाले गरेका थिए भने समापन समारोहको अध्यक्षता उपाध्यक्ष कुल आचार्यले गरेका थिए ।
मुख्यतः युगाण्डा सरकारबीच नेपाल र नेपालीको सम्बन्ध अगाडि बढाउनका लागि मुख्य भूमिका खेलेको एनआरएनए अफ्रिकाको क्षेत्रीय बैठकले नेपाल र अफ्रिकामा लगानीका विषय, अफ्रिकामा नेपाली कामदारका लागि रोजगारीका सम्भावना र चुनौती, दूतावासको आवश्यकता तथा तत्कालका लागि अवैतनिक दूतको माग, नेपाल र युगाण्डामा पर्यटकको सम्भावना, युगाण्डामा एनआरएनए तथा अन्य नेपाली व्यवसायीका लगानी र युगाण्डाका व्यवसायीद्वारा नेपालमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा गहन छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा पाकिस्तानी एशोसिएसनका सदस्य, युगाण्डा, फार्मर एशोसिएसनका प्रतिनिधि, युगाण्डाका उद्योग संघका प्रतिनिधि लगायतले पनि आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए ।
सरकार-सरकार बीच सम्भावना पहिल्याउने बाटो खुलेको छ
हिक्मत थापा, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघ
एनआरएनए क्षेत्रीय बैठक कत्तिको सफल भएको पाउनु भयो ?
बिगतका पहिलो र दोश्रो बैठक भन्दा यो बैठक बढी व्यवस्थित, उद्देश्यमुलक र भब्य रुपमा सम्पन्न भएको मैले ठानेको छु । सबै समस्याहरूमाथी विस्तृत रुपमा छलफल र उद्देश्य अनुरुप अफ्रिका र नेपालका बीच लगानी, सहकार्य र विकासमा साझेदारीका सम्भावना माथी छलफल गर्न पाइयो ।
युगाण्डाका तीनजना मन्त्रीस्तरका कार्यकारीहरूको उपस्थिति, छलफलमा सहभागिता, सहकार्य र एक आपसमा लगानीको सम्भावना माथीका छलफलले नेपाल र अफ्रिका बीच सम्भावना पहिल्याउने बाटो समेत खोलीदिएको छ ।
अफ्रिकामा नेपालीका मूख्य समस्या केके छन् ?
अफ्रिकामा कामका लागि आउने नेपालीहरूको मूल समस्या श्रम स्वीकृति र पासपोर्ट नविकरण नै हुन् । यहाँ भारतीयहरूको डायस्पोरा दुई सयभन्दा बढी बर्षको छ र सुदृढ अनि ठूलो संख्यामा छ । नेपालीहरूले भर्खर प्रवेश गरेका हुन र अझै आफूलाई स्थापित गर्नमै संघर्षरत छन् । त्यसमाथी सहयोगीको रुपमा नेपाल सरकारको उपस्थिति न्यून छ । ५४ देश मध्ये २ देशमा मात्र नेपालको दूतावास छन । सरकार–सरकार बीचका व्यापार लगायतका सम्बन्धहरू पनि स्थापित छैनन् ।
अफ्रिकामा आगामी सम्भावनाहरू के–के देख्नुभएको छ ?
सम्भावना यहाँ थुप्रो छ । संसारकै आगामी भविष्य र आर्थिक विकासको केन्द्र विन्दु अफ्रिका महादेश नै हो । यहाँ लगानी, व्यापार र रोजगारीका प्रशस्त अबसरहरू छन् । भारतीय तथा चिनीयाहरूको व्यापक र बढ्दो उपस्थिति यसका उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
त्यसबाहेक गरिबी र द्वन्द्वबाट पछिल्लो समयमा निस्केका र हाल विकास र आर्थिक, औद्योगिक समृद्धि तिर द्रुत गतिमा लम्केका यहाँका देशहरूबाट हामीले पनि सिक्न सक्छौं । यहाँबाट लगानी, पर्यटन र कच्चा तेल, कोइला खनिजजन्य वस्तुहरूको आयात र प्रसोधनको सम्भावना पनि थुप्रै छ ।
अफ्रिकामै नौलो काम गरेजस्तो लागेको छ
एनआरएनए अफ्रिका क्षेत्रीय बैठक एकदमै राम्रोसँग सफल बनाएका छौं जस्तो लागेको छ । यहाँका समस्याहरूका बारेमा गहन छलफल भएका छन् । पछिल्लोपटक अफ्रिकामा समस्याका रुपमा देखिएको मानव तस्करी नै हो । दोस्रो सम्भावनाका रुपमा देखिएको सीप र ज्ञानयुक्त नेपाली युवाका लागि रोजगारीको सम्भावना र तेश्रो नेपाली लगानीकर्ताका लागि युगाण्डा सम्भावना समेत भएको देश हो । हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित युगाण्डा सरकारका प्रतिनिधिहरूबाट पनि विशेष गरेर लगानीकै कुरामा जोड आएको थियो । उहाँहरूले “लगानी गर्नुहोस् हाम्रा कामदारलाई रोजगारी दिनुहोस् कमाएको पैसा आफ्नो देशमा लगानी गर्नुहोस्” भन्नेमा जोड दिनुभएको छ । युगाण्डामा भारतीय नागरिकले जस्तै नेपालीले पनि लगानी गर्न सक्ने हो भने नेपाल र नेपालीकै लागि खुसीको कुरा हो ।
देशप्रतिको अगाध माया पाएँ
दुर्गा अर्याल, कायरो
पहिलो पटक एनआरएनए अफ्रिकाको बैठकमा मा भाग लिने मौका मिल्यो । अत्यन्तै राम्रो लाग्यो । विदेशमा बसेर नेपालीले देशप्रति गरेको अगाध माया महशुस गरेँ । एनआरएनएले कुनै जातीय, क्षेत्रीय धर्म, र कुनै एक समुदायमा सिमित नरहि पवित्र भावनासहित विदेशमा रहेका समग्र नेपालीलाई एउटै छातामुनि गोलबद्ध गराउने काम गरेको पाएको छु । धेरै खुसी लागेको छ । यसरी नै अभियान अगाडि बढोस् भन्ने कामना गर्दछु ।
सरकारले अफ्रिकामा रोजगारीका सम्भावनाको खोजी गरोस्
कृष्णदत्त भट्ट, अध्यक्ष, एनआरएनए, केन्या
अफ्रिका क्षेत्रको तेश्रो बैठक युगाण्डाको कम्पालामा निकै भब्य र सभ्यरुपमा सम्पन्न भएकोमा सम्पूर्ण साथीहरूलाइ हार्दिक धन्यवाद छ ।
राजमणी जीलगायतका सम्पूण साथीहरूको अथक प्रयासले गर्दा बैठक निकै उपलब्धिमूलक रह्यो । नेपाल र युगाण्डाका नाागरिकबीच नयाँ आयामबाट सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।
अफ्रिकामा नेपालीका मुख्य समस्या भनेको अफ्रिकाभरीमा दुई देशमा मात्र दूतावास हुनु पनि हो । यस्तो अवस्थामा पूर्वीर पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रमा काम गर्ने नेपालीलाई बिभिन्न समस्या परेका बेला छिटो छरितो सेवा पाउन समस्या परिरहेको छ ।
मानव तस्करी पहिलेभन्दा निकै कम भएको देख्न र सुन्न पाईन्छ । नैरोबिको कुरा गर्दा विगतका दिनमा नेपाली चेलीबेटीहरू मुजरा (डान्सबार) मा ल्याइने र उनीहरू बिभिन्न समस्या पर्ने गरेका थिए । त्यसलाई समाधान गर्न हामी पनि लागि प¥यौ । तर, आजभोली प्राय मुजराहरू बन्द भइसकेका छन् । धेरैजसो अफ्रिकाका मुलुकमा बेरोजगारी समस्या निकै नै छ । त्यसैले काम पाउनु पनि त्यति सजिलो छैन् । तर, बिभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता भएकाहरूलाई सहजरुपमा काम मिलेको छ ।
अफ्रिकामा नेपालीले बिभिन्न पेशा र व्यवसायमा राम्रो तलब भत्ता तथा सुबिधायुक्त काम पाइरहेका छन् । कामका लागि कोही पनि अफ्रिका आउदै हुनुहुन्छ भने राम्रो काम तथा अन्यसेवा सुबिधाकोबारेमा बुझेर आउन अनुरोध गर्दछु ।
यहाँ कयौं नेपाली दलालको चंगुलमा परेर अलपत्र बनेकालाई उद्धार गरी नेपाल पठाएका उदाहरण छन् । अफ्रिकामा राम्रो आम्दानि पनि हुन्छ । तर, आफूसँग सीप हुनुप¥यो । यहाँ काम गर्दा वोर्क पर्मिट लिएर मात्र काम गर्न साथीहरूलाई मेरो सुझाव छ ।
हाम्रो माग भनेको पूर्वी र पश्चिमी अफ्रिकामा राजदूतावास खोलियोस् । श्रम स्विकृतिको लागि ठोस कदम चालियोस् । साथै बैदेशिक रोजगाारीको लागि सम्भावना भएका अफ्रिकाका देशहरूमा नेपाल सरकारको पहल होस् भन्ने चाहान्छु ।
पर्यटकीय हिसाबले नेपालर अफ्रिकाबीच धेरै राम्रोसम्भावनारहेकाले र यसबाट नेपाल र अफ्रिका दुबैलाई फाइदा हुने हुँदा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपाल र नेपाली चिनाउने महत्वपूर्ण काम भएको छ
सीता आचार्य, पर्वत हाल, युके
अफ्रिका सम्मेलन एकदमै सफल भएको मैले मानेकी छु । यो बैठकले अफ्रिकी जनता र सरकार समक्ष नेपाल र नेपाली चिनाउने काम गरेको छ । एनआरएनएले संसारका बिभिन्न देशमा गोलबद्ध हुँदै विश्व मानचित्रमा नेपाल र नेपालीको नाम चिनाउन सफल भएको छ । त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
सबैको सहभागीताले खुसी तुल्याएको छ
सदस्य. एनआरएनए, युगाण्डा
हामी आफै आयोजक भएपनि यत्तिको सफल होला भन्ने सोचेकै थिइन । धेरै खुसी लागेको छ । अफ्रिकाका बिभिन्न देशबाट मात्र नभएर युके, ओमान, रसिया, जर्मनी लगायतका देशबाट साथीहरूको उपस्थितिले खुसी तुल्याएको छ । आगामी दिनमा अन्य देशमा पनि यसरी नै सफलताका साथ बैठक सम्पन्न हुनेछन् भन्ने आशा लिएकी छु ।
अवैतनिक दूतको मागमा सरकारको ध्यान जाओस्
मन थापा,आइसीसी सदस्य तथा महिला संयोजक, एनआरएनए अफ्रिका
मेरो विचारमा एनआरएनए अफ्रिकी क्षेत्रीय बैठक अत्यन्तै सफल भएको छ । म्यानेजमेन्ट पनि अत्यन्तै राम्रो छ । अर्कोकुरा यहाँका मन्त्रीस्तरीय व्यक्तित्वहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउन सक्नु एनआरएनए अफ्रिकाकै लागि ठूलो कुरा हो । उनीहरूको रेस्पोन्स अत्यन्तै राम्रो पाएको छु ।बैठकका क्रममा उठेका तथा बैठकको घोषणापत्रमा उठेका कुराहरूको नेपाल सरकारबाट सम्बोधन हुने आशा लिएकी छु । नेपाली कार्यरत रहेको अफ्रिकाका बिभिन्न देशमा अबैतानिक दूतको माग मात्र पूरा गरिदिए पनि धेरै हदसम्म अफ्रिकामा रहेका नेपालीका समस्या समाधान हुने मैले देखेको छु ।
नेपालीहरूलाई दलालहरूले फसाएका छन्
आइसीसी सदस्य युगाण्डा
तथा जनरल म्यानेजर
के कोटेल्स होटल इन्तवे
अफ्रिकी देशहरुमा पछिल्लो समय मानब तस्करीका चलखेल बढेका छन् । अफ्रिकाका बिभिन्न देशलाई ट्रान्जिट बनाएर धेरै नेपाली दाजुभाइहरूलाई दलालहरूले फसाएका छन् । नेपालीहरू यहाँ आएर विचल्लीमा परेका घटना प्रशस्तै छन् । हामीले अघिल्ला बैठकहरूमा पनि मानव तस्करीका सम्बन्धमा जोडतोडले कुरा उठाएका थियौं र यसपटकको बैठकमा पनि यस कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।
नेपाली लगानीकर्तालाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं
दुई–दुई बर्षमा प्रत्येक महादेशमा हुने क्षेत्रीय बैठकलाई गैरआवासीय नेपाली संघभित्र विशेष महत्वका साथ हेरिएको हुन्छ । अफ्रिका महादेशमा यो बैठक तेस्रोपटक हो । म आफू कार्यकारी समितिभित्र नभएपनि युगान्डामा बैठक गर्नका लागिपहिलो प्रस्ताव मलाई नै गरिएको थियो । क्षेत्रीय बैठकमा अत्याधिक खर्च हुने हुँदा समितिबाट सकिंदैन कि, भन्ने कुरा भैरहँदा मैले भने यो प्रस्तावलाई युगाण्डालाई जुन दृष्टिकोणबाट हेरिने गरिन्छ त्यसलाई चिर्ने विशेष अवसरको रुपमा मैले लिएको थिएँ । समितिभित्र ‘पछाडी रमेश छ’ अर्थका लागि कुनै चिन्ता नगर्नुस् भनेर भनेको थिएँ ।
कार्यक्रम शुरु हुन एक महिना बाँकी रहँदासम्म पनि अर्थ संकलनले गति नलिँदा जिम्मेवार साथीहरूले कार्यक्रममा भाग लिन नभ्याउने घुम्न जाने जस्ता प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका थिए । दबाब धेरै थियो । खर्चको टार्गेटसम्म नपुगुन्जेल साथीहरूलाई पनि जाँगर नलागेको जस्तो थियो । मलाई विश्वास थियो ‘म गर्न सक्छु’ भन्ने । १५ दिन बाँकी रहँदै गर्दा त्यो टार्गेट पनि पार गरियो ।
अर्थ संकलनमा हिक्मत थापाज्यू र मेरो पहलबाट हाँसिल गरियो । त्यसपछि सबै साथीहरू जोडतोडले तयारीमा लाग्नुभयो । अन्ततः अफ्रिका क्षेत्रभित्रै अहिलेसम्मकै भब्य कार्यक्रम गर्न सफल भयौं । केही प्राविधिक त्रुटिका कारण कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा ढिलो शुरु भएको भए पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको मैले महशुस गरेको छु ।
हरेक कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड देखि लिएर परिकल्पना मेरो नै भए पनि दोश्रो दिनको कार्यक्रममा आफू सहभागी हुन पाइन । सबैभन्दा बढी मन खाएको बिषय चै त्यही रह्यो ।
मुख्य एजेन्डा डेभलपमेन्ट सेयरिङ भएकोले यसलाई बैठकका लागि बैठक मात्र नभएर देश विकासका लागि टेवा पु¥याउन सक्ने बौद्धिक सम्मेलनको एउटा रुप मानेको थिएँ भने अर्कोतिर युगान्डामा नेपाली लगानीकर्ताका लागि विशेष ध्यानाकर्षण गराउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु । यो बैठकले पक्कै पनि त्यो भूमिका खेल्यो होला भन्ने विश्वास छ ।भविष्यले देखाउला ।
युगान्डामा अनअराइभल भिसा मिल्ने हुँदा मानवतस्करी गर्नेहरूका लागि सहज बाटो बनेको छ । बिभिन्न प्रलोभनमा पारी ६–७ लाख जनही अशुल गरेर अफ्रिकी मुलुकसम्म ल्याइ अलपत्र पार्ने गरेको पाइएको छ । विगत दुईवटा क्षेत्रीय सम्मेलनपश्चात् कम चाहि भएको छ । निर्मुल पार्नका लागि त सरकारीस्तरबाटै विशेष कदम चाल्न जरुरी छ । गल्ली–गल्लीमा भएका म्यानपावर कम्पनीहरू पनि समस्याको जड हो । हरेक मानव तस्करीमा कहिँ न कहिँ म्यानपावरको संलग्नता हुन्छ । मेनपावरको जिम्मेवारी पनि सरकारीस्तरबाटै लिने हो भने एउटा हदसम्म तस्करी कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अर्कोतर्फ अन्य क्षेत्रमा भन्दा अफ्रीका क्षेत्रमा एनआरएनएको भूमिका धेरै राम्रो भएकोले संस्थालाई विश्वास गर्न पनि सक्नुपर्छ ।
मेरो कार्यकालमा धेरै साथीहरूले सम्पर्क गरी आउन चाहने कुरा व्यक्त गरेपछि बुझेर तस्करीमा पर्न लागेका ५ सय जनालाई त कान्तिपुरको सहयोगमा नेपालमै रोक्न सकेको अनुभव छ । बुझ्दा राम्रो देखिएको खण्डमा हामीले हाम्रो लेटरहेड्मा पत्र काटेर दिँदा इमिग्रेसनले ठाडै अस्विकार गर्छ र त्यही व्यक्ती सेटिङ मिलाएर त्यही एअरपोर्टबाटै एकहप्तामै यहाँ आइपुगेको पाइन्छ । यसले जनमानसमा संस्थाप्रतिको विश्वास कम भैरहेको छ भने अर्काेतर्फ अध्यागमनको छवि समेत खराब भइरहेको छ । यिनै बिषयहरू चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् । तर, लगानीकर्ताका लागि युगाण्डा एकदमै सहज छ । कम्तिमा एकलाख डलरसम्मको लगानीलाई युगान्डाले सहर्ष स्विकार गर्छ । चीन र भारतबाट अत्याधिक लगानी भइरहेको अवस्थामा नेपाली लगानीकर्ता पनि यता आकर्षित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हामी आइपरेका चुनौती समाधान गर्न सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
अफ्रिकाका नेपाली बारे सरकार गम्भीर बनोस्
सम्मेलन केही हदसम्म सफल भएको मैले मानेको छु । अलि विषयवस्तु भन्दा बाहिर गइयो कि जस्तो लाग्यो । यहाँका नेपालीका समस्याबारे गहन छलफलमा जान सकिएन कि भन्ने लागेको छ । प्राथमिकताका विषयभन्दा बाहिरका कुरा बढी आएका छन् । सम्मेलनमा आशा गरेजस्तो परिणाम देखियोस् । अफ्रिकामा रहेका नेपालीका समस्याबारे सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने चाहान्छु ।
युगाण्डाको फरेन करेन्सी पोलिसी एकदमै क्लियर छ
अफ्रिका संयोजक,गैरआवासीय नेपाली संघ, (एनआरएनए)
सम्मेलन कस्तो भएको मान्नुभएको छ ?
सम्मेलन अत्यन्त सफल भएको मानेको छु । सम्मेलनमा दक्षिण अफ्रिकाभरीको चर्चा अनि यहाँका सम्भावनाका बारेमा पनि । युगाण्डाका कृषि एसोसिएसन, मैन्युफक्चरिङ एसोसियनका प्रतिनिधिहरूको प्रस्त्ुतिमा युगाण्डामा नेपालीका लागि के कस्ता अवसरहरू छन् भन्ने उहाँहरूको मुखबाटै सुन्न पायौं । धेरै सम्भावनाहरू छन् र चुनौतीका विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं । सकारात्मक रुपमा नै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।
युगाण्डासँग नेपालले तत्काल के मा सहकार्य गर्न सकिएला ?
तत्कालै सहकार्य गर्न सकिने कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा हो । अहिले युगाण्डामा बार्षिक २० लाख पर्यटकहरू आउँछन् । २०२० सम्ममा ४० लाख पर्यटक भित्र्याउने युगाण्डा सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यहाँको ८० प्रतिशत जनता कृषिमा आवद्ध छन र नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यहाँका धेरैजसो कृषि उत्पादनहरू युरोपमा पु¥याइएको छ । हाम्रो पनि त्यस्तै सम्भावना छ । त्यही कुरामा रहेर हाम्रो छलफल पनि भएको छ । आगामी दिनमा पनि उहाँहरूले अन्य फोरममा बोलाउने बाचा दिनुभएको छ ।
यसमा एनसीसी युगाण्डाको भूमिका कस्तो रहला ?
एनसीसी युगाण्डाले नेपाल सरकार र युगाण्डा सरकारबीच पुलको रुपमा काम गर्ने र पर्यटनक्षेत्रमा सम्बन्ध बढाउनका लागि पहल गर्नेछ भन्ने आशा गरेका छौं ।
यहाँ नेपाली व्यवसायीहरूले कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्लान् ?
यहाँ लगानीका सम्भावनाका विषयमा स्मल स्केलका इण्डीष्ट्रजको प्रतिनिधिहरूले धेरै सम्भावनाका क्षेत्र रहेको देखाउनु भएको थियो । यहाँ सम्भावना अथाह छ । २०२० सम्म ४० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको युगाण्डा सरकारका प्रतिनिधिहरू हाम्रो कार्यक्रममा आउँदा उहाँहरूको प्राथमिकता सर्भिस इण्डस्ट्रीज तथा टेक्नोलोजी लगातयमा थियो । अहिले नेपालको सर्दभमा थुप्रै आइटी ग्राजुयटहरू उत्पादन भएका छन् । त्यो आइडिया नेपालको प्रस्तुतिमा पनि देखिसक्यौं । उनीहरूका लागि पनि उद्यमशीलतामा रुची भएकालाई यहाँका सबैखाले इण्डस्ट्रीमा सम्भावना रहेका छन् । यहाँ व्यवसाय गर्ने वातावरण राम्रो छ भनेर कम्पाला सिटीको मिनिस्टरले पनि बताउनुभएको छ । हामीले देखेको भोगेको हिसाबले तथा यहाँको ब्युरोक्रेसीको हिसाबले पनि व्यवसाय गर्न अत्यन्तै सहज वातावरण रहेको छ । यहाँको फरेन पोलिसी पनि अत्यन्तै राम्रो छ । उहाँहरूले यहाँको म्यानुफ्याक्चरिङ इण्डष्ट्रिमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । त्यसले गर्दा यहाँका स्थानीयहरूले काम पाउने तथा व्यवसायको आम्दानीलाई यहि लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छैनन् । फरेन करेन्सी पोलिसी एकदमै क्लियर छ । तपार्ईले कमाएको पैसा तपाईकै देशमा लैजानुस् तर उद्योग क्षेत्रमा लगानी गरिदिनुस् भन्ने उहाँहरूको अनुरोध छ । जुन कुरा हाम्रो अनुभवमा नेपालमा
वैदेशिक लगानी नीति त्यति सहज छैन भन्ने लाग्छ । नेपालमा विदेशीले लगानी गरेपछिको आम्दानी कसरी आफ्नो देश लैजाने भन्नेमा हाम्रो मानसिकता अलि खुल्ला नभएको हो कि जस्तो लाग्छ । हामीले त्यसलाई अझ सहज बनाउन जरुरी छ ।
पर्यटक भित्र्याउन र पठाउनका लागि के कस्ता कुराहरू अघि बढाउनु पर्ला?
सरकारले सहकार्य गर्नुभन्दा पनि जनता जनताबीचको सम्बन्ध बढाउँदै नेपाल र युगाण्डाका टुरिजम व्यवसायीलाई एकापसमा भेटाएर कति सस्तो र राम्रो प्याकेजमा नेपाल जान मिल्छ र युगाण्डा आउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पहल गर्नका लागि एनआरएनएसँग अनुरोध गरेका छन् । र सरकारीस्तरमा पनि पहल गर्ने बताएका छन् । उनीहरूले आफूले पनि सक्दो भूमिका खेल्ने कुरामा आश्वस्त पारेका छन् ।
अस्ति भर्खर राष्ट्र बैंकले निकालेको डाटामा नेपालीहरू बाहिर देशमा घुम्न जाने चलन एकदमै बढेको देखिएको छ । त्यो नेपाली र नेपालीमा मात्र होइन, संसारभरी त्यस्तै भएको छ । अहिले मानिसहरू धेरै घुम्न मन पराउने अवस्था छ । त्यो खालको माहोललाई हामीले पनि क्यापिटलाईज गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल सरकारले नेपालीका समस्या सुल्झाउनका लागि मात्र दौत्य सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने मात्र नभएर आफ्नो हंैसियत मिल्ने देशहरूसँग सम्बन्ध जोड्न पाए भोली उनीहरूसँगको सहकार्य र आपसमा आदान–प्रदान गर्न मिल्ने कुराहरू अझ बढी हुन्छन् । त्यो सँग सँगै टुरिजममा पनि सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
यसमा एनआरएनएको भूमिका कस्तो रहला ?
हाम्रो भूमिका अहिले पनि छ । हामीले यहाँका थुप्रै इण्डियन ओरिजिनलाई पशुपति दर्शन गर्न जाउ भनेर सहकार्य गरिरहेका छौं । अफ्रिका जस्तो थोरै नेपाली भएको ठाउँमा पनि जाम्बियाले ‘नेपाल डे’ मनाएर नेपालको पर्यटन तथा संस्कृति प्रमोसन गरिरहेको छ । हामीसँग सम्पर्कमा आएका तथा यहाँबाट नेपाल जानेलाई इन्फरमेशन दिएका छौं । नेपालका टुर अपरेटर र यहाँका टुर अपरेटरको एउटा फोरम हामीले बनाउन सक्यांै भने बिजनेस कै हिसाबमै पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
सरकारको प्रतिनिधित्व होस्
धनराज गिरी, युगाण्डा
युगाण्डामा सम्पन्न भएको अफ्रिकी बैठकले युगाण्डामा नेपालको नाम चिनाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मैले महसुस गरेको छु । हामीले यहाँ कुनै पनि सरकारी कामका क्रममा हामी नेपाली र हाम्रो देश नेपाल भनेर चिनाउँदा उनीहरू नेपाल भनेर नाम उच्चारण गर्न पनि अप्ठेरो मान्थे । नेपाललाई ‘नेपोल’ भनेर सम्बोधन गर्दा कतिपटक पीडाबोध पनि भएको छ ।
बैठकमा युगाण्डा सरकारका प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय मिडियाको उपस्थितिले पनि हामीले युगाण्डामा नेपाल चिनाएका छौं भन्ने लागेको छ ।
अहिले हामीलाई यहाँ सबैभन्दा बढी समस्या बिभिन्न अवस्थामा डकुमेन्ट बनाउनका लागि कायरो वा साउथ अफ्रिकाको दूतावास गुहार्नु परेको अवस्था छ । सम्भव भएसम्म दूतावास वा नभए सरकारको प्रतिनिधित्व हुने र कानुनी काम फुकाउनका लागि युगाण्डामा अवैतनिक दूतको नियुक्तिमा सरकारले ध्यान दिनेछ भन्नेमा आशावादी छु ।
यहाँ वर्किङ भिसा महँगो छ
युगाण्डाका साथीहरूको कडा मेहनतका कारण अफ्रिकी क्षेत्रीय बैठक भव्यरुपमा सम्पन्न भएको छ ।अन्य अफ्रिकी मुलुकहरूमा जस्तो युगाण्डामा नेपालीहरूका समस्या त्यति छैनन् । अहिले यहाँको ठूलो समस्या भनेको १–२ वर्षको वर्किङ भिसा बढि महँगो भएको र कति कम्पनीहरूले कामदारहरूलाई बिना भिसा राखिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । बिना भिसा काम गर्नु ठूलो चुनौती रहेको छ ।
अफ्रिकी मुलुकमा अन्धाधुन्ध दलालको भर परेर आउनु भन्दा सिप भएकाहरूले यहाँ आउने प्रयास गरेमा राम्रो हुनेछ ।
ऐक्यबद्धता मासिकको माघ अंकबाट